The Irrawaddy's Blog: အကြိုနေ့မနက် ဖွင့်ပွဲများ
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များဖွင့်ပွဲကို အကြိုနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်နှင့် မြို့တော်ဝန် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ရိုးရာမပျက် သင်္ကြန်ယိမ်းအကအဖွဲ့များ၊တိုင်းရင်းသားရိုးရာအဖွဲ့များ၊ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတများစွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့သည်။
Posted in: Culture , Sai Zaw , ယဉ်ကျေးမှု
That is what we can proudly call Burma. The military guys and cronies are damaging the image of country by putting indecently dressed beings on their stages. I was very ashamed about it and I wish no foreigner had seen it. The military destroy every sector of the society for them to be able to rape the whole country for very long time.